Zvakasiyana - ndinobva kuMac | Ini ndinobva kuMac (Peji 5)
Iyo vhezheni yeCall, French series, ichagadzirwa yeApple terevhizheni
Iyo vhezheni yeCall, French series, ichagadzirwa yeApple terevhizheni. Zvemukati uye vatambi veakateedzana hazvizivikanwe
Podcast 9 × 36: Mwaka Kuvhara
Sezvinhu zvese muhupenyu, zvinhu zvine mavambo nemagumo, mune ino nyaya isu tinofanirwa kuti "kusvika ...
Angela Ahrendts anotaura nezve bhizimusi rekutengesa muhurukuro nyowani
Mutevedzeri Mukuru weApple weRetail akataura pamusoro penyaya dzakasiyana, kusanganisira ramangwana rezvitoro.
Chinja iyo default application yakapihwa kuvhura faira pane macOS
Dzidziso inotitaurira iko kunyorera kwawakapa nekusarudzika kuvhura faira mu macOS, uye nemabatiro atinofanira kuita shanduko
Kukanganisa mu "Kurumidza Kutarisa" basa kwaizofumura data rakanyorwa
Wojciech Inodzora bhagi iro rinozofumura mafoto anoonekwa neKutarisa Kutarisa paMac, mune cache
Rapha Mac mabhegi ave kuwanikwa muApple Chitoro
Apple Store inotanga kushambadzira mabhegi uye masaga mabhegi eMac nePad, ayo akagadzirirwa kuchovha.
Uku ndiko kusagadzikana kutsva kweIntel processor inonzi LazyFP
Iko kusagadzikana kutsva kweIntel processors kunokanganisa ruzivo rwunosara muprosesa mushure mekuita zvakawanda Inonzi LazyFP
Little Snitch inogadziridzwa kuti ishandure 4.1 uye inouya nezvitsva
Little Snitch yakagadziridzwa kuti ishandure 4.1 neruzivo rwekugona kugovera yako mirawo uye mafirita nevamwe vashandisi vechishandiso.
Yekutanga isina kufanira macOS Mojave ine simba kumashure inoonekwa. Kufungidzira, tichaona mari yakawanda uye yakawanda sekuratidzwa kweMacOS Mojave ichiswedera
Kutanga kuratidzwa kweKeKit muMacOS Mojave
Kutanga kuratidzwa kweKeKit muMacOS Mojave, haibvumire iwe kuwedzera zvinhu kuchishandiso, asi zvinokutendera kuti uzvione.
Adobe inoisa mafonti akagadzirwa naBauhaus muCreative Cloud
Adobe anoisa mafonti akagadzirwa naBauhaus muCreative Coud pasi pezita rekuti Joschmi neXants. Zvimwe zvinyorwa zvitatu zvichaunzwa munguva pfupi
Sarudzo yekumomesa diski GUID haioneke muDisk Utility
Mune ino kesi, ndiwo maratidziro ekuratidzira anopiwa neDisk Utility chishandiso mu macOS, ...
Apple Store kugadzirisa kunouya kuLondon neBeijing
Apple Store kugadzirisa kunouya kuLondon neBeijing. Panyaya yezvitoro zvikuru zveApple, iyo yekuvandudza iri panguva
WWDC 2018, macOS Mojave, watchOS 5, iOS 12, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Vhiki iro Apple rakapemberera WWDC 2018, musangano wepasirese wezviuru, wapera ...
Angela Ahrendts anozivisa chirongwa cheprototyping kutanga muApple Store muna Chikumi. Ndiyo imwe kubheja neApple yehurongwa.
Vagadziri vewebhu vanofanirwa kuchinjisa zvemukati zvewatchOS 5
Vagadziri vanozokwanisa kuchinjisa mawebhusaiti kuitira kuti vagoonekwa paApple Watch. Maitiro ayo webhu anotaridzika uye isu tinofamba kuburikidza nawo zvinoshamisa.
Isu takaongorora yakanakisa keyboard iwe yaunogona kutenga kune yako Mac izvozvi, iine backlight uye spinner ine inogadziriswa mabasa.
Podcast 9 × 34: iOS 12 uye zvimwe zvakawanda
Vhiki rino isu takachinja zuva kuti rive mukutenderera kuzere neApple's WWDC. Mukutaura isu tese taitarisira vamwe ...
Dhawunirodha macOS Mojave mifananidzo yeMac yako
Zvingaitwe sei neimwe nzira, isu tatova neMacOS Mojave mifananidzo inowanikwa kune vese ...
Gurman anoburitsa fungidziro yake yeWWDC uye hapana Hardware mavari
Pasina kupokana icho chinhu chisingauyi kwatiri zvakare uye ndechekuti mune zvakawanda zvezviitiko zvakapfuura ...
IA Munyori kugadzirisa kune vhezheni 5 pakupedzisira inosvika
Iyo yekumisikidza zvinyorwa edhita kunyorera inozogadziridzwa pane macOS, ine yekunze nhau, faira manejimendi uye bookmarking.
Pakati pehusiku hwanezuro mu # podcastapple takataura kureba nezvenhau dzeIOS, watchOS ne tvOS….
Apple yakaburitsa nyowani nyowani yeiyo HomePod ine zvakawanda zvinogadziridzwa
Apple yakaburitsa nyowani software yekuvandudza kune yayo smart mutauri iyo inoita kuti pakupedzisira isvike kune ino ...
Apple inovhara Atlantic City Apple Chitoro
Apple inosarudza kuvhara Apple Store muAtlantic City nekuda kwekudonha kwekushanya. Ndiyo yechipiri Apple Chitoro kuvhara mugore. Vashandi vanozotamiswa.
Kutanga 18-core iMac Pro yakanyorwa pane peji raApple rakagadziridzwa
Yekutanga yakagadziridzwa 18-musimboti iMac Pro inoonekwa muApple Kugadziridza Chitoro muUS nezvikwiriso zve15%
Mimhanzi ine simba, kumutswa kweiyo iPod shuffle kunoenderana neSpotify
Zvekare midhiya mafomati uye ekare zvishandiso zviri, neimwe nzira kana imwe, kudzoka kudzoka. Iyo vinyl, ...
Iyo Apple Watch Series 3 LTE ndiyo yakanyanya kushandiswa pamawadhi akabatanidzwa
Iyo Apple Watch Series 3 ine LTE ndiyo yakanyanya kubatana, maererano neongororo yakaitwa naCanalys, uko 59% yemawachi muchikamu ichi ndiApple.
Murairidzi Apple Tarisa Nyowani Zhizha Tambo Yakaunzwa
Yakaunza tambo nyowani, zhizha muunganidzwa weApple Kutarisa kweye Kochi brand
Apple yakatumira kukokwa kweWWDC 2018 munaJune 4 kune vezvenhau
Apple yatotumira kukoka kumusangano weWorldwide Developers Conference munaJune 2018 ku…
Apple ichave ichifunga kuunza kumusika mumwe mutauri kuIyePodPod. Ichiri chakanyanya kukurumidza kuziva kana chichava mukurukuri mudiki, kana nekusiyana, yepamusoro-magumo.
Apple Yepasirese YeVagadziri Musangano iri padhuze nekona, saka mumavhiki mashoma ...
Moshi inotangisa tambo kuchaja MacBook yako uye chero USB-C chishandiso
Moshi USB-C Integra yekuchaja tambo ndiyo yakanakisa imwe nzira kune yepamutemo Apple tambo yehunhu hwezvinhu uye nemutengo
Apple Mutevedzeri weMutungamiri Lisa Jackson anogamuchira mubairo wekuchengeta nharaunda
Lisa Jackson naApple vakagamuchira mubairo weEnharaunda Achievement yekushandisa matekiniki egirini kuketani yekugadzira yaApple
Carpool Karaoke inowanikwa pane Apple TV app mahara
Iyo Tarenda Ratidza Carpool Karaoke ichave iripo pane Apple TV TV application. Isu tinoziva nhau kana kutorwa kwemifananidzo kweyechipiri mwaka
Yekupedzisira Kucheka Pro X inokundikana kubudirira muHollywood sevhidhiyo mupepeti
Final Cut Pro X haibudirire muHollywood sezvinoita Avid's Media Composer zvinoita. Kufanira kuchinjira kufilosofi yake kunoita kunge ndicho chikonzero chikuru.
Boka manejimendi rinotungamira kuCardhop, iine yayo yekutanga yekuvandudza
Iyo Cardhop maneja maneja inovandudzwa kune vhezheni 1.1 nekuvandudzwa kwehungwaru manejimendi manejimendi uye kuisirwa mitauro mitsva
Iko kuita kweApple kunodzoka kutara yakakwira, mushure mekuburitswa kwemhedzisiro
Apple migove haina kumira kukura kubva pakaratidzwa mhedzisiro yekota, kwavakatyora mhindu rekodhi. Warren Buffett anobvuma kubheja kukuru paApple
Vashandisi vanokumbira Apple kutsiva yakundikana MacBook Pro keyboards
Mushandisi akakumbira Shanduko.org yeApple kuti afunge kutsiva akakanganisika butter butter keyboards muMacBook Pro
Lingon chishandiso chinokutendera iwe kuti uzive uye gadzirisa zvese zvinoitika zvinoitika mukati meMacOS, kuti uwedzere kugadzirisa iyo system.
Edza iyo yekushandira mavara edhita Strike, zvichibva paMarkdown
Strike yakapusa uye minimalist mameseji edhita app, asi ine zvimwe zvemberi processor sarudzo seMarkDown
Podcast 9 × 30: Apple's umpteenth kutadza, asi kwete yekupedzisira
Vhiki rino takanetsa neChipiri manheru uye takapedza iyo #podcasapple neChitatu asi sezvamunoziva ndoda ...
Apple Mepu mota, dziripo mune dzinopfuura nyika gumi
Apple mota dzinoenderera kuunganidza data remangwana reApple Mepu. Ruzivo urwu runonyatso kushandiswa muMepu dzeinotevera macOS.
Tsvaga kana mumwe munhu akashandisa Mac yako neiyo Usakanganisa kunyorera
Nechisungo cheUsavhiringidza, tinogona kuziva kana mumwe munhu akaedza kuwana zvishandiso zvedu zvinehunyengeri, pamberi pekomputa.
Palo Alto Apple zvinowedzera, Kuwedzera kweKeKit, Tim Cook naDonald Trump kusangana zvakare, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Kunge Svondo yega yega, tinosvika pamwe nekuunganidzwa kutsva kwenhau dzinozivikanwa kwazvo dzevhiki dzinopera nhasi. Chokwadi mangwana ...
Lehigh Valley Apple Chitoro Inoenda Kunzvimbo Yakakura
Iyo Lehigh Valley Apple Chitoro kutamisirwa yakarongerwa 2018. Ino nguva, ivo vanotama kuti vape yakawanda chitoro nzvimbo.
Iyo 32GB RAM MacBook Pro haizove iripo kusvika angangoita 2019
Intel inozivisa kunonoka kutsva mu 10nm Cannon Lake mapurosesa, ayo anozotarisika kutakura ramangwana MacBook Pros uye inobvumira kukwirisa 32GB ye RAM
Apple ichakurumidza kutanga kubhadhara mamirioni faindi yakatemwa neEU
Apple ichatanga mwedzi unotevera kugadzirisa zvakanaka zvakatemwa neEU pakurapa kufarirwa kweIreland kuisa mitero yakadzikiswa.
Prizmo 3.5 ichavandudza OCR hunhu kuzivikanwa
Prizmo ndeye OCR kuverenga kuverenga iyo inovandudza yayo yekutsvaga injini mune iyi vhezheni 3.5. Inowanikwa mumitauro gumi nesere uye yakagadzirisirwa mavara aripo.
Mail Pilot inogadzirira vhezheni 3 nenhau dzakakosha
Mail Pilot iri muchikamu chebeta yeshanduro 3. Iyo post maneja iyo inotibvumidza isu kuwedzera mabasa kune maitirwo, anouya neakakosha maficha maficha.
Apple inopemberera Zuva rePasi nekuita kwaZiggy Marley
Apple yakaronga Beer Bash yekupemberera Zuva reNyika Pasi rose apo maartist akasiyana, kusanganisira Ziggy Marley, vakapinda.
Iko kukosha kweanotakurika Macs inodonha, sekureva kwechidzidzo
Anotakurika maMac anowira mukukoshesa, sekutsvaga kwakaitwa neLaptop Mag. Kushaikwa kwehunyanzvi, kusanganisira iyo yekubata skrini, kiyi mukukosha.
Yakaderedzwa Apple Watch kana SSD drive pakati peBay's Super Weekend madhiri
Pasina kupokana, isu tinofanirwa kutarisisa kune izvo zvinogona kupihwa izvo zvatinowana pamambure uye mu com ...
Tsvaga kuti kana yako email account yakabiwa nekuda kwe "ndakabatwa here?"
Pasina kupokana, zvinopfuura zvinogoneka kuti imwe yeakaundi maemail ako akatambura kubiwa pane imwe nguva ...
Imwezve vhiki tinounza chitsauko chitsva che # podcastapple yedu uye vhiki ino tanga tichitarisira mushure mevaviri ...
Zvinhu 3.5 zviri pano, zvichiwedzera kuvandudza manejimendi manejimendi
Zvinhu zvinosvika vhezheni 3.5 ichiwedzera nyowani mashandiro akadai sekuteedzera mabasa uye kugadzira basa pamutsetse kana kugadzirisa mamamenyu
Aya ndiwo matsva Startech Mac Dock yekubatanidza 4k skrini
Isu tinoziva chinopihwa chaStartech muDocks yeMac. Pamusoro pechinyakare, tinowana maviri mamodheru ane 4k yekubatanidza pa60Hz.
Apple Mepu inotsigira ruzivo rwekufambisa rweTennessee
Basa rekufambisa veruzhinji reTennessee rinouya kuApple Mepu. Mabhazi akajairika anowanikwa mukushandisa
Apple inosvika zana muzana rekushanda nesimba rinowedzerwazve
Apple ichangosvika iyo 100% yekugadzira nhamba kuburikidza neyakagadziridzwa simba. Zvirongwa zvavanazvo munzvimbo nevanopa zvinoramba zviripo.
Saudi Prince anotora kufarira Apple Park kubva kuApple chirongwa chedzidzo
Musangano pakati paPrince Mohammed bin Salman, anobva kuSaudi Arabia nehutungamiriri hweApple, kudoma zvirongwa zvekudzidza munyika yeAsia.
Iyi pfungwa yekumusoro-kumagumo Apple mahedhifoni akafuridzirwa nePambaPod
Yakaunza pfungwa yeakakwira-magumo mahedhifoni, ayo anogona kunge aine mamwe maitiro eanofungidzira mahedhifoni kubva kuApple
Apple Music inosvika makumi mana emamiriyoni ekubhadhara vanhu, sekureva kwetwitter kubva kuna Steven Huon weApple Music France. Angangoita mamirioni masere ari muchikamu chekuyedza chebasa.
Apple Inoburitsa Nyowani Apple Tarisa Mabhande eSystem 2018
Kutora mukana wehurukuro yedzidzo uye kuvhara kwenguva pfupi kweApple Chitoro, Apple inoburitsa tambo dzechirimo cha2018.
Chiitiko cheApple chekudzidzisa chinotanga nevhidhiyo "Mumwe munhu anogona kuchinja nyika"
Mutsara wekutanga weApple wegore wakazotanga. Ino nguva hatina kutenderera vhidhiyo ...
Apple akateedzana uye zvirongwa zvichave zviripo kubva munaKurume 2019
Apple yepakutanga audiovisual zvemukati zvakarongerwa kutanga kutepfenyura kubva munaKurume 2019. Nhepfenyuro dzinogona kutanga kumberi neyechitatu-bato zvemukati.
Tim Cook anoshandisa kutaura kwake kuChina Development Foramu kutaura nezve China neUS
Tim Cook anga ari mumwe wevatauri vehurukuro kuDevelopment Forum, yakaitirwa kuChina. Akapa pfungwa yake pamaonero eUS pamusoro pekutengeserana kwenyika.
Aya ndiwo mavambo eiyo Mac yekutanga ruzha inozivikanwa se "Sosumi"
Jim Reekes ndiye akagadzira muma80 mamwe emimhanzi inozivikanwa yaApple, kusanganisira iyo Mac Startup kurira.
Safari Copy & Namatira kuvandudza mune inotevera macOS 10.13.4 kugadzirisa
Isu tinoziva zviitiko zvitsva zvine chekuita neCopy uye Namatidza basa, izvo zvatinozoona mune yekupedzisira vhezheni yeMacOS High Sierra 10.13.4
Apple inotarisira kugadzirisa mwaka kutengesa kutengesa nekuda kwekubhadharisa sevhisi
Apple inotarisira kugadzirisa mwaka kutengesa kwehardware nekutengesa masevhisi seTunes, AppleCare, Apple Pay. Ichi chikamu chinokura pamitengo ye13%
Tsvaga zvakapetwa mafaira paMac neDupeGuru app
Isu tinopa DupeGuru, iyo inogadziridzwa zvakapetwa zvakapetwa mafaira kunyorera, iine mukana wekuziva degree rekupindirana kweimwe faira neimwe.
Kunyangwe kereke inogamuchira mipiro kuburikidza neApple Pay
Kana vakatiudza izvi makore mashoma apfuura isu hatizvitende… Zviripachena kuti Kereke iri kuUK yave kusvika…
Kuunza Joplin, imwe nzira kune Evernote
Joplin ndeye manyorerwo ekushandisa ayo anoverengeka sechiremera cheyakawandisa vhezheni, ichive yakavhurwa sosi uye nhasi yemahara
Gadzira marongero muDock neiyo eDock 3 app ye macOS
Iyo cDock 3 application inovandudzwa nezvitsva maficha uye kugadzirisa bug. Kugadziridza Dock kune kwedu kufarira kunogoneka uye iwe unowana kugadzirwa
Podcast 9 × 26: Pakupera isu tine chiitiko munaKurume
Imwezve vhiki tine episode nyowani ye # podcastapple. Pakati pevhiki ino yekupedzisira takaona chiziviso chaApple che ...
Apple inoburitsa yechitanhatu beta yeTVOS 11.3 yevagadziri
Iyo yechitanhatu beta yeTVOS 11.3 yevagadziri inosvika, kusvika parinhasi nhau dzinotarisana nekuvandudza kwekutamba uye AirPlay2
Apple yakaburitsa iyo beta 6 ye macOS High Sierra 10.13.4
Kunyangwe zvichitiratidza kuti tizvitende, Apple ine chaiyo chaiyo michina yemukati uye ndeyekuti kana tikaenda kunhau ...
Tangazve yako Mac's Bluetooth module kana uine matambudziko ekubatanidza
Kana zvinongedzo zvakabatana neMac zviine matambudziko, dambudziko rinogona kugadziriswa nekumisazve module yeBluetooth. Tinokuratidza maitirwo azvo, pamwe nemamwe mabasa
WWDC 2018, iyo Fitbit Versa, makadhi eGPU muMacs uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Kufanana neSvondo yega yega, mukati ini ndinobva kuMac OS tinopa akanyanya kutaridzika enhau kuunganidzwa pane yedu blog. Vhiki rino…
Ndeapi maMac anonyanya kushandiswa muchikamu chedzidzo?
Iyo nyanzvi Bradley Chambers inotiratidza pfungwa yake yekutenga Mac mune ekudzidzisa network, achiziva kusarudza kuti Mac ndeipi iri nyore
Kunyangwe hazvo kutengesa kweApple kuchiwedzera, iyo kambani haigadzirise uye mushandisi anoiendesa kwavari
Kushaikwa kweApple kwehunyanzvi kunoratidzwa muHarris Reputation Quotient, ongororo yevanopfuura 28.000 vagari vemuUS.
Apple Mepu inowedzera ruzivo pamabhasikoro emaroja mune mamwe maguta zana nemakumi manomwe nemashanu
New York, Paris neLondon kusvika zvino maguta chete maari Apple aive neruzivo rwe ...
Apple inoburitsa yechishanu beta yeTVOS 11.3 yevagadziri
Sezvo Muvhuro wega wega Apple inoburitsa zvidzoreso kana mabheji matsva ezve anozove anotevera masisitimu anoshanda emidziyo yavo…
Iyo KardiaBand bracelet yeApple Watch inogona kuona yakakwira potassium
Iyo KardiaBand bracelet yeApple Watch inozoona potasiamu muropa uye nekudaro kudzivirira coronary chirwere chemoyo.
Iyo Transcend JetDrive 825 SSD inobvumidza kuishandisa seyekunze asiwo yemukati SSD
Transcend JetDrive 825 ndangariro ndiyo yakakwana mukwanisi wevakuru maMac ayo anoda kutsiva SSD yavo. Iyo kit inokurumidza kupfuura SSD uye inobvumira iyo iripo disk kuti ishandiswe zvakare
iCloud.com inoshandiswa zvine mwero asi ine yakakosha mabasa
Zvinoenderana neongororo, vazhinji havazive webhu iCloud.com. Uye zvakare, isu tinokudzidzisa iwe kudzoreredza iyo faira, kubata kana noti yakadzimwa nekukanganisa paICloud.com
Podcast 9 × 24: Mamaneja ePassword VS iCloud Keychain
Pakati pezuro manheru podcast takataura nevatinoshanda navo kubva kuActualidad iPhone uye Actualidad Gadget nezve dzakasiyana nhaurwa ...
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 51
Mavhiki maviri, idzi shanduro hadzikundiki uye isu tatova pakati pedu inotevera vhezheni yeApple yekuyedza browser ye ...
Iyi ndiyo nyowani Pamba Podhi pfupi firimu inotungamirwa na, Spike Jonze
Mutauri mutsva weApple, iyo HomePod, yave kuiswa mushambadziro nyowani yakatangwa naApple uye inotungamirwa naSpike ...
Wedzera kuzvionera kweMac yako neyeMyAppNap application
Isu tinopa iko kunyorera kuchiri panguva yekuyedza MyAppNap, iyo yaunogona kusevha Mac bhatiri nekuremadza kunyorera kumashure
Iyo Apple Watch ichatipa danho nyowani nyowani paZuva reMadzimai reInternational
Apple inotipa chinetso chitsva chebasa chine chekuita neApple Watch, ichitora mukana weZuva reVakadzi reInternational. Ino nguva isu tinofanirwa kupeta chiitwa chinosanganisira kuzadza mhete.
IDC data inosimbisa kutengesa kwakanaka kweApple Watch panguva ya2017
Kune mafemu akati wandei akaburitsa yavo data pamusika wekutarisa akangwara uye ese anowirirana ...
Sanganisa mafaera mu macOS neakavanzika "Sevha se" basa
Sanganisa mafaera pakati pemafolda, kusarudza sarudzo inoenderana nezvatinoda. Isu tinoziva rakavanzika basa "Sevha Se"
Iyi inogona kuve iyo macOS 11 zvinoenderana nepfungwa yakaitwa nemugadziri
Isu tinoona macOS 11 angave sei kubva paruoko rwemugadziri, echinyakare maapplication anopindirana mudesktop, nyowani kubva kuControl Center uye zvirinani Rima nzira pakati pezvimwe zvitsva.
Kopa runyorwa rwemafaira ese mune dhairekitori kune TextEdit mumasekondi
MuMacOS tinogona kuteedzera rondedzero yemafaira ese mune dhairekitori muTextEdit mumasekondi, kunyatsogadzirisa TextEdit uye kuteedzera uye kunama.
Tim Cook achaenda kuChina Development Musangano semubati wechigaro
Tim Cook achaenda kuDevelopment Forum ichaitwa munaKurume muChina, saCo-sachigaro. Mahofisi makuru emarudzi mazhinji achaenda pachiitiko ichi.
CBS Sports HQ ndiyo chiteshi chazvino chinowedzerwa kuchikamu cheMitambo cheApple TV
CBS Sports HQ inosvika muchikamu cheMitambo cheApple TV, iyo network ichapa mitambo maawa makumi maviri nemana, mazuva manomwe pasvondo
Apple inogona kuburitsa mahedhifoni epamusoro gore rino
Apple inogona kuburitsa mahedhifoni matsva ekumusoro pakupera kwegore ra2018. Ichokwadi kuti ichave mahedhifoni mahedhifoni uye inofungidzira kuisa Siri.
Apple kubvisa iTunes Store rutsigiro rwekutanga-chizvarwa Apple TV muna Chivabvu
Apple icharega kutsigira iTunes Chitoro chechizvarwa chekutanga Apple TV kubva muna Chivabvu 25. Nekudaro, Windows XP neVista vanobatana nechiyero.
Matambudziko matsva eApple Watch, beta nyowani yeMacOS Yakakwira Sierra 10.13.4, nhau dzeAirPlay 2, data padanho repamusoro reICloud Drive uye zvimwe mune zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac.
Mumwezve Svondo isu tiripano kuti tigovane akanyanya kuwonekwa nhau kuunganidzwa pane yedu blog muvhiki rapfuura….
Apple yakatumira vhidhiyo nyowani pane yayo YouTube chiteshi. Iyi inoreva kune yekutanga setup yeiyo HomePod smart mutauri
Gadzira Podcast yako neAnchor uye uiise kune Apple Podcast
Anchor inosvika vhezheni 3.0 uye yave, pakukumbirwa nevashandisi, chishandiso chekugadzira, kugadzirisa uye kurodha maPodcast.
Maitiro ekugonesa kana kudzima iyo Dashibhodhi mu macOS High Sierra
Iyo Dashibhodhi inotibvumidza isu kuti tiwane akasiyana masystem masystem muchimiro chemawijeti tisingafanirwe kuwana iko kunyorera kana kuvhura zvakananga.
Kufanana Bhokisi Rekushandisa 2.5 rave kuwanikwa nezvitsva maficha
Yakaunzwa Kufananidza Bhokisi Rekushandisa 2.5, iine zvinhu zvakagadziridzwa uye kuwedzerwa kwezvinhu zvitsva senge kutora skrini
Kuwedzera kwemabhangi uye echikwereti masangano anoenderana neApple Pay anoenderera mberi
Huwandu hwemabhangi nemasangano echikwereti anoenderana neApple Pay anoramba achikura, zvirinani muUnited States, uko huwandu hwavo hwakawedzera ne25 mamwe.
Pane ino chiitiko Luis akatiyeuchidza nezve anopfuura zana zana ezvikamu izvo zvatakatakura zviripo pane yeYouTube chiteshi ...
Apple inotarisana neAustralia Green Party pamusoro penzvimbo yeApple Chitoro chitsva
Sarudzo yehurumende yeAustralia yekupa Apple mvumo yekuvaka Chitoro cheApple mune inoyevedza Federation Square muMerbbourne yashandura bato reGreens kupikisana.
Spotify iri kushanda pane mutauri kukwikwidza nePodPod
Runyerekupe pamusoro pekugona kuburitswa kweyewo gudzanzwi neSpotify iri kuwedzera zvakare mushure mekuona ichangoburwa mabasa kupihwa kubva kukambani yeSweden.
Iye zvino unogona kuverenga discs muAPFS fomati yekutenda kune yemahara Retrofit Kit application
Kubva kuvakomana paParagon kunouya iyo Retrofit Kit, ine kugona kuverenga APFS kubva kuHFS + dhiraivha. Kune inotevera vhezheni inotarisirwa kuti igone kugadzirisa aya mafaera.
Cheki yemadhora zviuru zviviri zvakasainwa naSteve Jobs anokwira kumusika
Chigadzirwa chinokwira kuenda kumusika uye icho chine hukama nengano Steve Jobs chinowanikwa mune cheki yaakapa kumusikana wake wenguva iyoyo ye $ 2.000
Apple yakaburitsa yechitatu beta yevagadziri veMacOS High 10.13.4
Apple yakaburitsa yechitatu beta vhezheni yeiyo ichave inotevera macOS High Sierra 10.13.4 yekuvandudza. Mu…
Apple iri kutsvaga mashandisiro matsva eiyo Apple muraraungu logo
Apple yakamhan'arira June apfuura muJamaica uye gare gare muUnited States chikumbiro chekunyoreswa kwemuraraungu weiyo kambani yeCupertino-based.
Twitterrific inoramba ichitora mukana wekubviswa kweiyo pamutemo kunyorera uye inovandudzwa nenhau nyowani
Mutengi weTwitter weMac, Twitterrific achangowana gadziriso achiwedzera maficha nyowani nekuvandudza iwo atova nawo.
Mamwe windows muApple Chitoro muChicago atanga kutsemuka
Iyo Apple Chitoro yakatarisana nedambudziko rayo rechitatu rakakura dhizaini nechitarisiko chekutsemuka, icho chinoramba chichikura, mune imwe yemahwindo ezvitoro.
Kune mamwe madrones anoverengeka akarembera padenga reApple Park
Ichi chaive chinhu chaigona kuonekwa chichiuya uye ichocho ndechekuti Apple Park chinangwa chakajeka kune vazhinji vatyairi ...
Kambani yekuAmerica Hewlett Packard ichangobva kuzivisa kuti ichatanga kupa vatengi vayo vebhizimusi Mac, iPhone, iPad neApple Watch.
Kuchenesa mafaira emafaira atinowanzoshandisa kwenguva pfupi ibasa rakareruka kwazvo nekuda kweiyo NuClear Folder application, yemahara application.
Ongorora uye gadzirisa yako MacBook bhatiri neBattery Mask
Kuziva ruzivo uye mashandiro ebhatiri redu kwakakosha, kunyanya kana zvatanga kuratidza zviratidzo zvekuneta.
Twitterrific inoderedza mutengo wayo zvinodarika makumi mashanu kubva muzana mushure mekuzivisa kweTwitter kubvisa purogiramu yayo
Vakomana vari paIconfactory vakacheka mutengo wevatengi vavo veTwitter yeMac, Twitterrific, neinopfuura hafu, zvichitevera kuziviswa kwekuguma kwekutsigirwa kwepamutemo Twitter app yeMac.
Twitter inosimbisa kuti iri kusiya rutsigiro rwekushandisa kwayo paMacOS
Iyo Twitter inotsigira account yakazivisa zviri pamutemo kuti haichazopa rutsigiro rwekushandisa kweMac.
Gadzira mepu ye hard drive yako neDisk Girafu
Kana zvasvika pakutora girafu pane kugoverwa kwemafaira pane yedu hard drive, iyo Disk Girafu kunyorera inotipa isu inokurumidza uye yakapusa mhinduro.
Sangana neGitFinder, iyo Git mutengi inosanganisirwa mushe pamwe neKutsvaga
GitFinder ndeye Git maneja iyo inotibvumidza isu kuti tiwane kugadzirwa kuburikidza nekubatanidzwa mune iyo Tsvaga. Tinorasikirwa nebasa asi isu tinoshanda nechimwe chirongwa chezviitiko zviviri.
Maitiro ekukurumidza kuviga kana kuratidza mafaera paMacOS nekhibhodi pfupi
Kana iwe uchida kukurumidza kuvanza uye kuratidza ako akavanzika mafaera, inokurumidza nzira iri kuburikidza nekhibhodi nzira pfupi, pane kuburikidza nemamenyu.
Sangana neLaCie 2big Dock, chiteshi chekumisikidza neThunderbolt 3
Isu tinoziva iyo 2big Dock, RAID yekuchengetera uye docking hub, ine Thunderbolt 3 yekubatanidza uye slots evapikicha makadhi.
Shanduro dzekutanga dzeramangwana Apple Magirazi dzinotiyeuchidza nezvaVaMagoo
Kana zvese zvikaita sekunge zvinoratidza kuti maApple Magirazi ari kure kure kusvika pamusika, vakomana veDropNews vakaburitsa madudziro akasiyana siyana ayo anopa munhu kufunga pamusoro pezviri kuitika nepfungwa dzevagadziri
Muchirongwa nhamba 21 yemwaka wepfumbamwe weiyo iPhone uye ini ndinobva kuMac podcast, takataura kwenguva refu nezve iyo HomePod, zvayakanakira, zvakaipira, uye matambudziko ...
YouTube TV sevhisi inokwidza mitengo mushure mekuwedzera mitezo mitsva
Google's Internet chiteshi chikuva, YouTube TV, ichangobva kuzivisa kuwedzera kwemutengo wemubhadharo wemwedzi nemwedzi kuwedzera mukuzivisa mitsva chiteshi mapakeji.
HomePod inogona kusiya mamaki pane varnish-apedza huni huso
Vamwe vashandisi vanocherekedza mamaki kubva kuPambaPod painogara pane varnished huni. Apple inoziva kuti iyo silicone iri pasi pepasi pemutauri inogona kusiya mamaki kana ichiita nehuni. Vazhinji vavo vanoenda vega.
Google inotangisa Chrome 65 ine yakavakirwa-mukati ad blocker
Google ichangoburitsa Chrome 65, yekutanga browser pamusika ine yakavakirwa-mukati ad blocker iyo inobatsira uye nekuvandudza kubatisisa ruzivo kune vashandisi nekubvisa zvinokanganisa uye zvakaoma kushambadza.
Chidzidzo chinosimbisa kuti iyo HomePod inonyatso kuendesa ruzha mumba mese
Iyo algorithm inoshandiswa neApple kugovera ruzha zvakaenzana, maererano neongororo yakaitiswa, kuyera ruzha kumatope mana mumba uye izvi zvinobva zvave zvakafanana.
Apple inosimbirira kuti haidi drones yezvivakwa zvayo
Apple inoramba iri pachinzvimbo chayo kuyedza kudzivirira drones kubva pakubhururuka pamusoro pezvivakwa zvayo, kunyangwe yagamuchira mvumo yepamutemo yekubvisa zvivakwa zvayo kubva mundege dzakadai.
Sekureva kweVatengi Reports, ese ari maviri Sonos One uye Google Home Max inonzwika zvirinani pane iyo HomePod
Consumer Reports yakaburitsa mushumo wayo paPodPod, mushumo unoiisa pazasi peGoogle Home Max uye Sonos One.
Skype ine yekuchengetedza bug asi Microsoft haina kuronga kuigadzirisa chero nguva munguva pfupi
Iyo mameseji uye vhidhiyo yekufona chikuva ine chekuchengetedza bug iyo Microsoft isingaronge kugadzirisa iyo kwekanguva, zvirinani munguva pfupi.
Tucson ikozvino inotsigira ruzivo rwekufambisa veruzhinji kubva kuApple Mepu
Guta reTucson nderekupedzisira kujoina kirabhu yakasarudzwa yemaguta iyo inotipa ruzivo nezve ruzhinji rwekufambisa paApple Mepu
Muvhidhiyo yekupedzisira yedrone yeApple Park, tinogona kuona kuti mashandiro acho akapedzwa sei, saka ma cranes ayo achasara angangonyangarika mwedzi uno.
Maitiro ekubvunza Siri kutamba Podcast pane HomePod
Dzidziso pane iwo mameseji atinogona kuudza Siri paPambaPod iyo Podcast yatinoda kuteerera nekutamba, kumberi uye kumbomira Podcast yedu.
Iyo HomePod ine yakavanzika 14-pini yekubatanidza uye 16GB yekuchengetedza, zvinoenderana neIFixit
Ivo vakomana veIFixit vakatotanga kubvarura iyo HomePod, chishandiso icho chisingatombo gadzirisike sezvo pasina nzira yekuchikatanura pasina kuchityora.
Tarisa pane izvo zvakakosha chaizvo neNuClear Desktop
Kutenda kune iyo NuClear Desktop application isu tinogona kuviga ese iwo maapplication atisingadi kwenguva pfupi kuitira kuti tigone kutarisa chete pabasa redu.
Tambo yePowerPod tambo inogona kubviswa, asi iwe haufanire
Iyo tambo yePodPod tambo inokwanisa kutsiva, asi maitiro ekuchichinja hazvisi nyore, nekuti nekuda kwekuenderera kwekumanikidza kwatinofanira kuita, zvinogona kukonzera kubatana kuti kutyoke.
Tevedza kutenderera kwemwedzi neiyi widget ye macOS
Isu tinoziva ichi chishandiso chinotitaridza imwe neimwe yemwedzi zvikamu mune yekushandisa mashoma iyo iri pabharaki rebasa.
Sonos inogamuchira iyo HomePod neinoda kuziva Spotify playlist
Mugadziri Sonos akashandisa playlist paSpotify kutumira meseji inogamuchirwa kuApple's HomePod.
Maitiro ekuisa mafonti pane Mac
Kuisa mafonti paMac inzira iri nyore uye zvinongotora masekonzi mashoma kana tikatevera matanho ese atinoratidza mune ino dzidziso.
Maitiro ekuvakazve iyo Spotlight index pane macOS
Inotarisa yekutsvaga injini ndicho chakanakisa chishandiso chatinacho mu macOS, chishandiso icho chero chikonzero chingamire kushanda kana kuzviita zvisirizvo, zvichitimanikidza kuvaka zvakare index yayo
Apple Kunyorera Zvigadzirwa uye squaring iyo Denderedzwa
Iyo ingori fungidziro, asi Apple inogona kunge iri kuongorora kunyorera masevhisi kwete kwete chete emasevhisi, asiwo ezvigadzirwa zviri kutengeswa.
YouTube inovandudza zvizere mashandisiro ayo eApple TV, kunyange iri yakafanana
Iyo YouTube application yeApple TV ichangobva kuvandudzwa kuvandudza mashandiro asi ichipa imwecheteyo inotyisa mushandisi ruzivo kusvika zvino.
Eddy Cue akapinda chiitiko chakaitirwa muLos Angeles nemagazini yeVariety. Ikoko vakataura nezve iyo HomePod uye Apple zvinangwa nehurongwa hwayo hweTV
Showrunner Brian Fuller haazove mugadziri uye munyori wezvinyorwa zvemwaka mutsva weA Amazing Tales, nhevedzano iyo Apple parizvino ine kodzero.
Isu tinoenderera mberi neshanduro nyowani dzeApple Safari Technology Preview browser, uye ino inguva 49 ...
Apple Pay inowedzera makumi maviri nematanhatu emabhangi anoenderana uye zvikwereti zvikwereti seApple Pay
Iyo Apple Pay michina haimire, uye tichakamirira kuvhurwa kweiyi tekinoroji yekubhadhara muBrazil, inotevera ...
Apple chigadzirwa chemari chinogona kuve nemutero wakaderera, nekuda kwechibvumirano naGoldman Sachs
Apple inenge ichitaurirana neGoldman Sachs kana mamwe mabhanga ekudyara, zvinobatsira zvakanyanya kune vatengi vayo uye nokudaro zvinowedzera kutengesa.
European Union ichaongorora kuti kutenga Apple kweShazam kunokanganisa kukwikwidza
Inenge mwedzi miviri mushure mekusimbisa kuenzaniswa kweShazam neApple, zvinoita sekunge dzimwe nyika dzeEurope hadzitarisike zvakanaka pakutenga uku, nekuti zvinogona kukanganisa makwikwi.
Maitiro ekuvanza ese asingashande windows uye maapplication pane macOS
Kuderedza zvese zvinoshandiswa zvisina basa pane desktop yedu uchishandisa nzira pfupi yekhibhodi ibasa rakareruka uye rinokurumidza rinotiponesa yakawanda nguva.
9 × 20 Podcast: Apple Yakashata NeyePodPod?
Apple yaida kuvhura yayo nyowani HomePod mutauri uye vashandisi vaida kukwanisa kunakirwa nayo kumba, ...
Apple Park yakaonekwa kubva pameso evashanyi nevashandi
Uye ndezvekuti kwete chete kubva kune ndege dzedrone iwe unogona "kushanyira" Apple Park, kune zvakare vashandisi vazhinji ...
Apple inoshandira mutori wenhau Alex Gale kuti atungamire Apple, Beats 1 uye iTunes yekunyora timu
Sekureva kwemagazini yeVariety, Apple yakahaya mupepeti Alex Gale kuti atarisire mutsara weApple Music, Beats 1 uye iTunes.
Iyo Apple Store yekugadzirisa hurongwa inoenderera mberi. Zviri kumusoro kweSouthlake chitoro muTexas.
Iwo maApple Stores anoteedzera yekuvandudza mwero weimwe vhiki imwe neimwe. Kunyanya shanduko dzinoitwa muApple Chitoro pamberi pa2009
Dzidziso yekuti ungawedzera sei geolocation kumifananidzo isina iyo muApplication application. Tichashandisa smart album.
Tinogona kuziva nhasi kana mashandisiro atakaisa paMac edu achizomhanya munzvimbo inokwana makumi matanhatu neshanu chete, iine 64-bit maitiro e macOS
Zviziviso zvePambaPod, Dolby Vision paApple TV 4K, iMac Pro, masosi epamba ePodPod, mhedzisiro yemari yeApple uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Imwezve Svondo kuunganidzwa kwenhau kwaSoy de Mac kunosvika.Inosvika mushure mesvondo iro, saka ...
Yekutanga 18-core iMac Pro Benchmarks inosvika.
18-core iMac Pro kuita kuyerwa kunoitwa. Iyo Multi-musimboti Benchmark mamaki anosvika zviuru makumi mashanu emapoinzi.
Mune vhezheni nyowani yeMacOS, mashandiro achakunda pamusoro pezvinhu zvitsva
Iyo nyowani vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu inotarisa pane kugadzirisa zviputi, kugadzirisa mashandiro uye kugadzikana kwese kweiyo inoshanda sisitimu, mukutarisana nenhamba yakakura yezvinhu zvitsva.
Kota yekupedzisira ya2017 ingadai yakave yakanakisa munhoroondo yaApple maererano nekutengesa
Apple inopa mhedzisiro munaFebruary 1 uye sekureva kwevaongorori veWall Street, iyo yakanakisa kota maererano nekutendeuka munhoroondo inotarisirwa.
Milwaukee naOmaha ikozvino vape ruzivo nezve zvifambiso zveruzhinji paApple Mepu
Maguta maviri ekupedzisira kuti atange kuratidza ruzivo nezve mabasa ekufambisa veruzhinji paApple Mepu ndeMilwaukee neOmaha, achiwedzera kumaguta anopfuura makumi matanhatu anowanikwa paApple Mepu.
Kugadziridza kwekuita kweLightroom Classic 7.2 kuri kuuya munguva pfupi
Simudzira kubva kuLightroom Classic kune vhezheni 7.2. Iyi yekuvandudza inotarisa mukuvandudza mashandiro, kunyanya pamadiki emagetsi michina.
Aya ndiwo anobatana neMac Pro uye maitiro ayo
Ongororo yekubatana uko iMac Pro ine uye mabhenefiti anouya neimwe neimwe. Isu tinosimbisa iyo 10 Gbps yekubatanidza yeEthernet kadhi
Apple inoramba iri pachikuva chevakuru chip uye semiconductor vatengi mu2017, mushure meSamsung
Zvinoenderana nedhata rakanyorwa naGartner, Apple Inc ndiyo yave iri kambani yatenga zvigadzirwa zvechip zvakawanda mushure meSamsung, ...
Apple inotsigira vhidhiyo post-yekugadzira mashopu nekupa akawanda maMac uye ekupedzisira Kucheka Pro X marezinesi
Apple inotsigira boka rekugadzira mafirimu nemaMacs, makamera uye Final Cut Pro X mukugadzira zvikabudura. Vatori vechikamu vanosangana neApple yekudzidzisa mamaneja uye vatungamiriri vemafirimu
Nzira dzekuvhara dzakawanda macOS maapps panguva imwe chete
Dzidziso yekuti ungavhara sei akati wandei maapplication panguva imwe chete kubva ku macOS kune chero anoshanda masisitimu, kana chikumbiro chakavharwa.
Podcast 9 × 18: Kumirira kwapera, iyo HomePod iri pano
Rimwe vhiki ratinaro tinoda kugovana nemi mose # podcastapple yevhiki rega uye ino nguva nhau ...
Adobe inogadziridza Photoshop CC uye Adobe XD CC ine itsva Sensei maficha
Adobe inoburitsa nyowani nyowani ku Photoshop CC uye Adobe XD CC pamwe nekubatanidzwa kwemabasa matsva eSensei uye nehumwe hutsva hwakajeka.
Apple inoburitsa beta yekutanga ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.4 yevagadziri
Rimwe chete zuva mushure mekuburitsa iyo nyowani vhezheni yeiyo macOS High Sierra 10.13.3 system, Apple inoenderera ...
Kuchengetedzwa kugadzirisa kwe macOS Sierra neEl Capitan, inogadzirisa yeMeltdown uye Specter
Ivo vanobva kuCupertino vakatanga chirongwa chakakosha chekuchengetedza kwevashandisi vasina chikonzero ...
Iyo HomePod haizove neese maficha pakuburitswa kwayo.
Iyo yekutanga vhezheni yePambaPod haizove nemabasa ekuteerera kuratidza kune mutauri akasiyana ekuteerera ekuteerera pane yega Pamba Podhi kana redhiyo basa. Tichazviona mune yekugadzirisa software pakupera kwegore.
Chinja kurira kwemaapplication zvakazvimiririra neRuzha Kudzora kweMacOS
Ruzha Kudzora kunotibvumidza isu kubata iro vhoriyamu uye kuenzana kweimwe neimwe macOS application zvakazvimiririra. Iko kunyorera kunoisa pabhara rebasa.
Xiaomi anoomerera pakutaridzika seApple's MacBook ine yayo Mi Notebook Mhepo
Kana paine yeChina yakasimba yakatsunga kutaridzika seApple iyi Xiaomi. Tese isu pano tamuziva kare kubva ...
Tim Cook anokurudzira chirongwa mumayunivhesiti makumi manomwe eEuropean
Apple CEO Tim Cook anotanga chirongwa chekuvandudza chirongwa munzvimbo makumi manomwe dzekudzidzisa nzvimbo muEurope.
Disney inoshandira ex-iTunes Executive kuti iite yayo yekumhanyisa chikuva
Disney inoshandira masevhisi aKevin Swint, aimbove mushandi weTunes semutevedzeri wemutungamiriri wenguva yemberi Disney TV, kana Disney yekushambadzira sevhisi
Apple inodzokorora yegumi nerimwe yegore rinoteedzana pamusoro peiyo Fortune magazini chinzvimbo
Apple inodzokorora yegumi nerimwe yegore rinoteedzana, kumusoro kwemagazini yeFortune. Pamusoro gumi ndeaya: Google, Amazon, Berkshire Hathaway, Starbucks, Walt Disney, Microsoft, Southwest Airlines, Fedex uye JPMorgan Chase
Reboot nyaya pa Skylake uye Kaby Lake mapurosesa mushure mekushandisa iyo Specter chigamba
Vamwe ma processor eIntel vangave vachisangana nenyaya, kunyangwe kutangazve, mushure mekuisa chigamba chinovatadzisa kubva kuSpecter. Iye zvino Skylake uye Kaby Lake mapurosesa angakanganiswawo.
Apple inoshandura nzira yemabhazi evashandi kudzivirira kuparadza
Mumazuva achangopfuura pakave nekuparadzwa kwemabhazi anotakura vashandi veApple kuenda kuCupertino, kunyangwe kutyora mwedzi webhazi.
Apple yakaburitsa yechitanhatu beta yeTVOS 11.2.5 yevagadziri uye beta bvunzo
Apple ichangoburitsa beta rechitanhatu kune vanogadzira uye beta testers yezvinangwa zvekuyedza, zve ...
Western Dhijitari inosvitsa G-Speed ​​Shuttle, kune avo vanoda yakawanda yekunze yekuchengetedza
Yakaunzwa iyo G-Speed ​​Shuttle bhokisi neThunderbold 3, ine chinzvimbo chei 4 mabays uye 48TB. kumhanya kwemadhisiki i7200 RPM uye inosvika ku1000 MB / s akaverengwa
Nhasi anoratidza makore gumi kubvira Steve Jobs aunza iyo yekutanga MacBook Air
Makore gumi apfuura kubva Steve Jobs aunza iyo MacBook Air. Raive iro rakanyanya kudarika nzvimbo nguva nekuda kwekureruka kwayo, kuonda, isina floppy disk drive.
Martin Luther King, Jr. anoonekwa pawebhusaiti yeApple achirangarira kuzvarwa kwake
Chero ani aive mudziviriri wekodzero dzevanhu achitora mhirizhonga isiri yechisimba kuhwina kodzero dzevagari ve ...
Zvinoenderana nekudzidza, Apple HomePod inouya panguva yakanakisa pamusika, apo vashandisi vatanga kufarira vafambi vakangwara.
Kuedza kwemoto muApple Chitoro, Apple ichave yakakosha 1 tiririyoni madhora, chengetedzo bhagi mune macOS, Specter uye Meltdown kudzvinyirirwa uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Munzvimbo zhinji muSpain tiri kusangana nemadutu anoita kuti hupenyu huome zvakanyanya, asi panogara paine ...
Podcast 9 × 16: 2107 uye 2018, yapfuura uye ramangwana reApple
Takatanga gore ndokutanga nekushinga kukuru iyo #Podcastapple yatange tichiita kwenguva yakati rebei nevatinoshanda navo ...
Wakatarisa mashandiro eSpecter uye Meltdown pane maMac akura
Akaita bvunzo aine akati wandei maMac kubva muna2011 na2013 uye akasiyana masisitimu anoshanda, kuti averenge kudonhedza kwekuita kweSpecter neMeltdown.
Satechi nhasi yazivisa kuvhurwa kwechaji nyowani yeWWW-C-75W iyo ine akawanda madoko ...
Nyowani Aluminium Khibhodi yeMac Matias RGB-Backlight
Iwe unoda RGB backlit keyboard kune yako Mac? Kambani yeMatias iri kuratidza kuzvipira kwayo kutsva muchikamu ichi paCES 2018
Mota odhiyo hofori Alpine inotangisa yayo yekutanga kuyangarara unit neCarPlay
Alpine yakaunza multimedia player yemota, iyo inogona kuenderana nemotokari ine 6,1 kusvika 7-inch skrini ine CarPlay
ViewSonic Inotangisa 8K uye 4K UHD Monitors neThunderbold 3 Kubatana
Ma monitors maviri kubva ku ViewSonic imba akaunzwa, iine 4K UHD uye 8K resolution uye Thunderbold 3 kubatana, iine mukana wekugadzirisa iwo mavara.
WD Yangu Cloud Kumba idiki NAS iyo inotipa isu ese mashandiro anodiwa nevazhinji vashandisi, pamutengo unodhura kwazvo uye uine dzakawanda sarudzo dzekuchengetedza.
"Ndafara kukuziva" ndiwo meseji inogamuchirwa kubva kuApple Store yekutanga muSouth Korea
Kuvhurwa kweApple Chitoro muSouth Korea kwave pedyo. Parizvino, poster inoratidza pane iyo facade: "ndafara kusangana newe" sechirevo chenyika yeApple kune nyika kunowanikwa dzimbahwe reSamsung
Iyo Apple Watch ichakwanisa kudzora mamwe mashandiro emidziyo yeWhirlpool
Vakawanda maWhirlpool mamodheru e2018 achave nebasa rekubvunza nekutarisira zvigadzirwa zvemagetsi, kubva paApple wachi
OWC Inoburitsa ThunderBlade V4 yeiyo Ultra-Yekukurumidza Kuchengetedza yeVashandi
OWC inounza kumusika ThunderBlade V4, yakasimba ndangariro yehukuru hudiki uye nekumhanya kwakanyanya. Kushandiswa kwaro kunoitirwa hunyanzvi.
Isu tinoziva zvemukati meMac Pro, nekuda kwekubviswa kwakaitwa neIFixit
Iyo yakakurumbira imba yekutsiva zvinhu zveMac, yabvarura uye iMac Pro uye inotiratidza isu zvemukati nezvayo zvirevo.
Iyo Soy de Mac timu inokushuvira iwe Goredzva Rakanaka!
Svondo ino iSvondo yakakosha uye 2017 yapera uye tinotanga 2018. Mune mashoma ...
IMac Pro inotanga kusvika kuApple Store
IMac Pro inotanga kusvika kuApple Stores kutenderera pasirese. Tsvaga kana ichiwanikwa kune yako padyo Apple chitoro.
AirPods iri kushomeka zvakare, musangano mukuru wevashandi paSteve Jobs Theatre, kusaina kutsva kuApple, Tidal ikozvino paApple TV uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Zuva rasvika apo mamirioni avanhu vanouya pamwechete kuti vashandise nguva dzinokosha. Vazhinji vachazviita izvi ...
Chengetedza maemail ako neUnibox, pane kupihwa kwenguva shoma
Kana iwe wakaneta neMail uye huwandu hwayo hushoma hwemabasa, inogona kunge iri nguva yekuyedza dzimwe nzira senge Unibox
Apple inoshandira vatatu vatungamiriri kubva kuAmazon Studios
Apple inoenderera ichitsvaga vatungamiriri vatsva kuti vatungamire yavo yemberi yekuparadzira chikuva. Iwo matatu matsva ekusaina anobva kuAmazon Studios
27 2017-inch iMac inowanikwa muchikamu chakagadziridzwa muEurope
Yakagadziriswazve 5-inch iMac 27k inotengeswa mueurope. Vanogona kutengwa muzvitoro zvepamhepo uye vane garandi yegore rimwe chete.
2018 inotanga nedenho nyowani inokurudzirwa naApple kune Apple Pay vashandisi
Apple inopa chiitiko chitsva chevashandisi veApple Watch. Pakati pemazuva manomwe akateedzana tinofanirwa kupedzisa maringi ekuita matatu.
Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo mumabhangi kuChina, United States, Ireland nedzimwe nyika
Apple Pay inoenderera ichiita nzira yayo mumabhangi akasiyana kutenderera pasirese uye nekuwanda uye ...
Vhidhiyo nyowani-yekuona vhidhiyo yeApple Park inotiratidza mamiriro ayo azvino
Mune ino kesi Matthew Roberts, ari mukutungamira kwekuunza rwendo rutsva mu4k mhando kuburikidza neanenge apedza iwo ...
Apple ichaita musangano wayo wevazhinji vanogovana paSteve Jobs Theatre
maererano neshoko kuUS Securities and Exchange Commission Apple ichaita Musangano wayo Mukuru weVashandi munaKukadzi munaSteve Jobs Theatre.
Iyi ndiyo DJI Mubatsiri 2 kunyorera kweMac uye yako DJI drone
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanirwa kunge wakagadzirira kana iwe uchitenga iyo DJI brand drone ndiyo ...
9 × 14 podcast: iyo iMac Pro nyowani iri pano
Vhiki rino ku # podcastapple takataura kwenguva refu nezve iyo nyowani iMac Pro iyo ingori maawa mashoma ...
Apple inoburitsa yakaringana Hirise Pro kuratidza kumira kweMac Pro
Apple inotangisa gumi nembiri yeSouth Hirise Pro Monitor mount, yakakwana yeMac, inosanganisira iMac Pro kana LG Ultrafine Monitor
Isu tinopedzisa nhasi tichitaura nhau dzinosuruvarisa uye ndezvekuti nhasi Chitoro cheApple chapambwa ...
Apple hombe mutengesi wekutengesa chiteshi inogadzirira kutengeswa kweMac Pro
Apple yekambani yekutengesa chiteshi ingadai yakatangwa nevatengi kuti ivabvunze pamusoro pezvavanoda uye kuvapa iyo iMac Pro
Gadzira iyo Bata Bhawa zvakasiyana ne BetterTouchTool
Ne BetterTouchTool unogona kubata zvirimo izvo iwe zvauchaona muTouch Bhawa. Unogona kuvandudza zviripo kana kuwedzera zvitsva nezvishandiso.
Safari yemacOS inotsvaga ese akavhurika tabo
Safari ine chinhu chinokutendera kuti utsvage pakati pemazwi pakati pese tabo yakavhurwa mubrowser ye macOS
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 45
Chimwe chinhu kupfuura zvakajairika mavhiki maviri atora kubva kuApple kuvhura iyi vhezheni yekuyedza browser Safari, kubvira ...
Apple inowana Podcast chishandiso "Pop Up Archive"
Apple ichangowana yekutanga iyo inopa masevhisi kune zvemukati majenareta ePodcast nhepfenyuro inozivikanwa sePop Up Archive
Uye pakupedzisira Zvita asvika uye nawo Svondo yekutanga yezvakafanana, imwe Svondo yekunyepedzera uye iri ...
Aya ndiwo mabhanga ekupedzisira kujoina Apple Pay muUS, Australia neHong Kong
Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo muAustralia, Hong Kong uye iri kugumisa kuwedzera kwayo muUS nemabhangi makumi mana ekupedzisira
Yakaunzwa iyo HDMI 2.1 standard iyo inobvumira 48Gbps uye vhidhiyo kusvika ku10k
Yakaunzwa iyo HDMI 2.1 standard iyo ichatibvumidza isu kutarisa vhidhiyo uye teerera kurira nehutachiona hwehuwandu kupfuura zvakapetwa izvo zviripo.
Mune podcast manheru apfuura takataura kwenguva refu nezve yakakosha nyaya yekuchengetedza yakaitwa pachena mu ...
Apple inowedzera "Live Sports" chikamu kune tvOS 11.2 beta
Vashandisi vanoshandisa iyo beta vhezheni yeTVOS vane Live Live ficha yeTV app inowanikwa
Kunetseka kukuru kwakawanikwa mu macOS High Sierra iyo inobvumidza kuwana Mac yako pasina password
Wakawana kusagadzikana kunokanganisa macOS High Sierra sezvo ichibvumidza kuwana nemudzi mushandisi kune zvirimo zvemakomputa. Isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekuigadzirisa.
Apple inovhura Apple Store muDowntown Brooklyn zuva rinotevera 2 chitoro nhamba 10 muNew York uye 499 mupasi rose.
Kana iwe uchida iyo keyboard ye iMac Pro, heino mufananidzo weyakagadzirwa
Isu tinoziva keyboard yakada kufanana neayo isu ayo tichanyatso kuona muMac Pro.
Tora Steve Jobs figurine, kurangarira mamwe eakakurumbira Apple anotangisa
Tinogona kuwana mhando yepamusoro uye chaiyo yeSteve Jobs mune huru Apple chigadzirwa mharidzo.
Iyo 2018 MacBook Pros inogona kuve ne6 cores
Intel ingadai yakagadzirira iyo 2018 MacBook Pro processor, iyo yaizove ne6 cores, kuchengetedza zvakafanana kushandiswa.
Kutenda kune Unclutter, tinogona kubata mafaera, zvinyorwa uye clipboard zvemukati pamwechete uye nyore kwazvo.
Bvisa zvinyorwa kubva kuma screenshots neiyo Screenotate app ye macOS
Screenotate chishandiso chinotibvumidza kutora mavara kubva kumufananidzo kana kukurumidza kuwana chinongedzo kubva pawebhu.
Jonathan Ive achataura musi waNovember 29 muWashington
Jonathan Ive akakudzwa nemagazini yeSmithsonian. Iye achapa hurukuro nedzimwe nhengo maererano neApple ecosystem.
Apple Store yeBurlingame yakavhurwa mushure mekugadziriswazve kukuru
Burlingame iconic Apple Store inovhurwazve kune veruzhinji kana ichinge yagadziridzwa nemaitiro matsva eApple uye dhizaini dhizaini
Apple Mepu mavans anoonekwa muPortugal, Spain, Croatia neSardinia
Iyo Apple mota inowedzera kutora mifananidzo. Ino nguva isu takakwanisa kuiona kuCroatia, Portugal, Madrid neBarcelona.
Shandisa makiyi ako e multimedia chete ne iTunes kana Spotify, mune macOS High Sierra
Isu tinoziva nezve yechitatu-bato kunyorera iyo inovhara kushandiswa kwemultimedia makiyi ku iTunes uye Spotify. Maitiro aya haaitike mune macOS Yakakwira Sierra.
Mune ino kesi, #todoApple podcast nhamba yegumi inotarisa zvakanyanya pakuonekwa kwe ...
Shanduro nyowani yeSafari Technology Preview inowanikwa kurodha pasi
Uye ivo vatove pane vhezheni 44 yeiyi Apple yekuyedza browser, Safari Technology Preview. Ino nguva pa ...
Kambani yekutsvagisa misika inofungidzira kutengesa kweApple Watch pamamirioni 3,9 muQ3.Vashandisi vanenge zviuru mazana masere vakasarudza akateedzana 800.000 neLTE.
Chidzidzo chinoshandisa iyo Apple Watch sechishandiso chekushanda pakurara kufema uye hypertension
Iyo Apple Watch iri kushandiswa mukudzidza paYunivhesiti yeSan Francisco, kudzora kufema kufema uye hypertension.
Tine chatinacho Bundle rezvikumbiro zvinokosheswa ne $ 493 pamadhora makumi matatu chete, nekoponi. Inosanganisirwa: PDF Nyanzvi uye Roxio Toast 30 Titanium.
Nike ichauya munaNovember 14, nyowani Apple Tarisa Nike + nhevedzano 3, neruvara rwegrey uye nerima grey Loop chimiro tambo
Kuwedzerwa kwenguva yekudzoka kwaApple yeKisimusi yave kuda kudonha
Nemazuva aya, Apple tsika inowedzera nguva yekudzorera zvinhu. Zvichida, ichatanga inotevera Mbudzi 25.
Apple Watch backup, macOS beta 2, multi-charge dock, nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Imwezve Svondo yemwedzi waMbudzi tiri pano kuzokupa iwe kuunganidzwa kwenhau kune iyo Svondo yega yega ...
Iwe unoda kuona iyo Apple webhusaiti muna 2001? Wayback Machine inokubvumira
Uye kwete chete iyo webhusaiti yeApple inowanikwa mune ino hombe database yatinowana pawebhu, ...
Manage yako Mac's yakasviba modhi neyemahara Night Shifty app
Iyo yakasviba modhi uye tembiricha yeako Mac skrini zvino inogona kutarisirwa neyemahara Night Shift app
Simbisa simba remifananidzo yeMacBook Pro yako, ine Sonnet Portable GPU
Sonnet ine mhinduro mbiri dzekuvandudza iwo magiraidhi kugona kweMac yako.Iyo ndiyo mhinduro kwayo yeMacBook Pros kana iwe uchida kugadzirisa mapikicha kana mavhidhiyo.
Apple Music ichangobva kuburitsa vhidhiyo uko nyeredzi ari maalbum eakasiyana siyana maartist. Apple Music inowanikwa paWatchOS 4.1
MacOS 10.13.1 yave kuwanikwa, pamwe ne iTunes 12.7.1 pane Mac App Store
Yakaburitsa vhezheni yekupedzisira ye macOS High Sierra uye vhezheni 12.7.1 yeTunes. Iyo yekuvandudza inogadzirisa bug uye inounza emojis nyowani
Kuvhurwa kwe iPhone X, macOS beta 4 uye 5, Macs muna 2018 uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Vhiki rino rakatarwa chose nekuvhurwa kweiyo nyowani modhi ye iPhone X uye ndeyekuti kuchengetedza kuri ...
Kana iwe uine APFS, gadzira iwo mufananidzo weako system pasina kushandisa Time Machine
APFS uye macOS Yakakwira Sierra inounza sarudzo yekuita mufananidzo weiyo system. Muchidzidzo ichi tinokuratidza kuti sei
Dzazvino kuvandudzwa kuLightroom 6, iyo vhezheni yemufananidzo mupepeti iyo ine chisingaperi rezinesi
Kugadziridza kwekupedzisira kweLightroom 6, kubva kuAdobe foto chirongwa. Iyi ndiyo ichave yekupedzisira vhezheni iwe yaunogona kuwana nekusingaperi
Vashandi veWalmart vachashanda neMac kutanga gore rinouya
Nyanzvi yeWalmart Miles Leacy akazivisa kutengwa kwema 100.000 Macs evashandi vekambani kuti vashandise kutanga gore rinouya
Podcast 9 × 08: Iyo iPhone X iri pano
Tiri muvhiki yakakosha yevanoda Apple ne iPhone kunyanya. Nezuro husiku mu ...
AI ichagadzira inosvika zviuru gumi nezvitatu muna13.000, sekureva kwekanzuru yehunyanzvi yakatorwa naApple
Kanzuru yeRuzivo Technology Indasitiri Council inofungidzira huwandu hwebhizinesi hwe6 kusvika 13 bhiriyoni muAI na2025
Vitality Inishuwarenzi Inobatana neApple Watch Grant Kana Vako Vatengi Vakuekisesaiza
Angela Ahrendts anoti haazi mutsivi waTim Cook, nekudaro achiramba makuhwa
Runyerekupe runozivisa Angela Ahrendts, semutevedzeri waTim Cook anodzora Apple. Akabvunzwa mubvunzurudzo uye akazviramba
QacQoc GN30H, adapta yezvinhu zvese zvaunoda
Iyo QacQoc GN30H inounganidza kubatana kwese kwauchazoda kune yako MacBook mune imwe adapta inobatana kune yako Laptop USB-C.
Kugadzirwa kweGPU iyo iMac Pro inotarisirwa kutakura kwakawedzera
Apple yaizenge ichiwedzera mirairo yemakadhi emifananidzo iyo yaizotakura iMac Pro, iyo yatinozoona zvichidaro muna Zvita anotevera.
Isu takaedza base yekuchaja yeApple Watch uye iPhone kubva kuOittm [Ongororo]
Mumusika wanhasi wezvishandiso zveApple Watch, iPhone, Mac uye zvimwe zvishandiso zvatinoshandisa zuva nezuva, pane ...
Elmedia Player uye iyo Folx yekurodha chirongwa ingadai yakagadziriswa muna Gumiguru 19 neiyo OSX / Proton malware
Adobe inopa iyo Scribbler chirongwa chekushongedza mifananidzo nhema nechena nekuda kweAI
Adobe yakaratidza iyo Scribbler chirongwa kuAdobe MAX 2017, inokwanisa kupenda pikicha nhema uye chena mune imwe nyaya yemasekondi.